भारतिय सुरक्षाकर्मीले प्रवेशमा रो'क ल'गाएपछि ५ सय बढी भारतीय मजदूर सीमामा अ'लपत्र ! - Filmy News Portal Of Nepal
भारतिय सुरक्षाकर्मीले प्रवेशमा रो’क ल’गाएपछि ५ सय बढी भारतीय मजदूर सीमामा अ’लपत्र !
भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रवेश न’दिँदा नेपाल भारतको दशगजा क्षेत्रमा ५ सय भारतीय नागरिक अ’लपत्र परेका छन् । कोरोना भा’इरस स’ङ्क्रमण रो’कथा’म तथा नि’यन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले मुलुकभर लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण नेपालका विभिन्न जिल्लाको इँटा भ’ट्टाका सञ्चालकले मजदुरलाई घर फर्कन भनेपछि घरतर्फ फर्कने क्रममा उनीहरू सीमामै रो’किएका छन् ।
अ’लपत्र परेका भारतीय नागरिकलाई लैजानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीमार्फत अ’नुरो’ध गरिरहेको इलका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले बताए । उनका अनुसार यसरी दशगजा क्षेत्रमा अ’लपत्र पर्ने काठमाडौँ, लहान, विराटनगर, धरान र झापाकै विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने मजदुर रहेका छन् ।
भारत सरकारले नेपालको सीमा क्षेत्रमा रोकिएका आफ्ना नागरिकलाई सीमा प्रवेशमा अझैसम्म अनुमति दिएको छैन । स्वदेश फर्कने आसमा सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिक उ’द्धारको पर्खाइमा छन् । नेपाल भारत सीमा दशगजा क्षेत्रमा करिब ५ सयभन्दा बढी भारतीय नागरिक २४ घण्टादेखि रो’किएका छन् । केही दिनदेखि काँकडभिट्टा बसपार्क क्षेत्रमा अ’लपत्र परेका उनीहरुलाई प्रहरीको सहयोगमा मेची नगरपालिकाले दशगजामा लगेर छा’डिएको थियो ।
अ’लपत्र भारतीय नागरिकलाई काँकडभिट्टा सोसाइटीले खाना खुवाइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘दशगजामा नेपालबाट फर्कने भारतीय नागरिकलाई भारत सरकारले अनुमति नदिँदा भीडभाड बढेको छ । खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन, काँकडभिट्टा बसपार्कमा उस्तै छ । भारतका विभिन्न स्थानबाट फर्किएर सीमा नाकासम्म आइपुगेका नेपालीलाई सु’रक्षित किसिमले उ’द्धार गरेर आफ्ना जिल्लामा पठाइरहेको पनि उनले बताए ।’
यहाँ कोरोना स’ङ्क्रमणको जोखिमका साथै मानवीय स’ङ्कट आउने सम्भावना देखिएको । भारतले आफ्ना नागरिकलाई अ’लपत्र पारेर ना’कामा राख्न नमिल्ने बताउँदै उनले उनीहरुलाई भारत आफैँले बुझेर लैजानुपर्ने बताए ।